Nitsangana tamin’ny maty Jesosy (2)
"Efa natsangana tamin’ny maty tokoa Kristy ho santatr’izay efa nodimandry. " 1 Korintiana 15:20
"Raha manaiky an’i Jesosy ho Tompo amin’ny vavanao ianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena ianao." Romana 10:9
Araka ny fanadihadiana natao vao haingana, dia manodidina ny 60%-n’ireo mitonon-tena ho kristiana no mino ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, ary 10 ka hatramin’ny 15% fotsiny no mino ny fitsanganan’ny maty.
«Kanefa ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty sy ny fahafatesany, no zava-dehibe indrindra eo amin’ny tantara. Raha tsy nitsangana tamin’ny maty Jesosy Kristy, dia tsy misy fanantenana ho an’ny kristiana, tsy misy azo nandresena ny faharatsiana sy ny fahafatesana. Ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty no vato fehizoron’ny fanorenana kristiana manontolo; io no aharetan’ny zava-drehetra, ary koa mirodana avokoa ny zava-drehetra raha tsy nisy izany ; raha tsy nisy izany, dia tsy Mpamonjy izao tontolo izao intsony Jesosy, satria Izy koa dia ho nila mpanafaka, tsy ho naharesy ny ota sy ny fahafatesana, ary isika tsy ho nanana antoka momba ny fandreseny» (E. Elvin).
Nefa nivoaka ny fasana Jesosy. Tsy afaka nihazona Azy ny fahafatesana. Io toe-javatra io no manaporofo fa Zanak’Andriamanitra marina tokoa Izy (Romana 1:2-4). Io toe-javatra io no milaza mialoha ny hitsanganan’ny olona rehetra amin’ny maty, any aoriana. Jesosy mihitsy no nanambara hoe: “Izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray” (Jaona 11:25). Ary izay tsy mino kosa dia hitsangana ihany koa, saingy mba hotsaraina (Jaona 5:25,28,29).
Ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty no tena fototra iorenan’ny finoana kristiana. Manambara ny hitsanganantsika ihany koa izany, ary fototry ny fanantenana kristiana. Tsy ho ela dia ho tanteraka io fanantenana io, rehefa ho avy Jesosy, Izy mihitsy, hamoaka avy ao am-pasana ny mpino tamin’ny vanimpotoana rehetra. Ny fiainan’ireo kristiana voalohany dia nitodika tamin’ny fiandrasana io fiverenana io. Izany koa no aroso ho antsika ankehitriny.